🥇 ▷ Samsung waxay soo saartay kiniin aamin ah Galaxy Tab Active Pro ✅
Samsung waxay soo saartay kiniin aamin ah Galaxy Tab Active Pro
Samsung waxay soo bandhigtay kiniiniga ruxmay ee Samsung ee IFA 2019 Galaxy Tab Active Pro. Markaad horumarineyso qadka Galaxy Tab Firfircoon soo saarey ku tiirsanaanta aaladda.
Ahaanshaha mid ka mid ah wakiillada taxanahan, Galaxy Tab Active Pro waa IP68 oo boodh-dabool leh. Intaa waxaa dheer, kiniinku wuxuu u hoggaansamayaa heerka milatariga Mareykanka ee MIL-STD 810G, taasoo macnaheedu yahay in qalabku awoodi karo inuu ka hortago dhibic ka soo gaartay dherer ah illaa 1.2 m iyada oo aan wax cawaaqib xumo ah la kulmin.
Muuqashada Samsung Galaxy Tab Active Pro waxay si xoogan u xasuusineysaa kuwii ka horreeyay ee Galaxy Tab Active 2, kaas oo la sii daayay sanadkii 2017. Kiniinkan cusub wuxuu sidoo kale haystay bezels ballaaran oo ku xeeran bandhigga iyo badhamada qalabka Android. Si kastaba ha noqotee, Galaxy Tab Active Pro wuxuu leeyahay soo bandhig weyn iyo qeexitaanno farsamo oo horumarsan.
Galaxy Tab Active Pro wuxuu ku qalabaysan yahay muuqaal 10-inji ah oo leh xalka 1920 × 1200 pixels iyo cabirka saamiga ah ee 16:10. Iftiiminta ugu badan ee shaashadda waa 550 cd / m2. Kiniiniga waxaa loogu talagalay inuu ku shaqeysto xitaa galoofyada qaro weyn, maadaama ay la socoto S Pen.
Samsung ma shaacin magaca chipset-ka, laakiin sida uu sheegayo Geekbench waa inay noqotaa Snapdragon 710. Qaddarka RAM waa 4 GB, mugga ROM waa 64 GB, iyadoo ay suuragal tahay in la ballaariyo kaararka microSD-ka. Awoodda batteriga ayaa gaarta 7600 mAh.
Kameradda 13-megapixel iyo 8-megapixel selfie camera waxay mas’uul ka yihiin toogashada sawir iyo fiidiyow. Waxaa sidoo kale mudan in la xuso taageerada LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, taageerida qaabka desktop shirkadda, joogitaanka dekada USB Type-C iyo sawirka sawirka faraha ee furaha bartamaha. Software-ka ayaa adeegsanaya qalabka loo yaqaan ‘Android 9 Pie’ oo horay loo sii rakibay.
Iibka Samsung Galaxy Galaxy Active Pro wuxuu ka bilaaban doonaa Jarmalka Oktoobar 1. Qiimaha kaniiniga leh taageerada Wi-Fi waa € 600, nooca LTE wuxuu ku kici doonaa € 670. Samsung waxay ballanqaadeysaa inay bixin doonto cusboonaysiinta barnaamijyada kiniiniga ee afarta sano ah.